Sida loo soo dejinta MPEG in FCP on Mac (Mavericks ka mid ah)
> Resource > Beddelaan > Sida loo soo dejinta MPEG / Mpg in ay Final Cut Pro on Mac OS X (Yosemite ka mid ah)
Pro Goo Final waa doorasho premium wixii Mac video tafatir ah, oo waxaa si weyn u isticmaala users Mac hadda. The MPEG heerka files isticmaali karaan codes kala duwan iyo daalin in loo dhoofiyo si ay Final Cut Pro. Haddii aad yimaado guud ahaan xaalada tani, xalka ugu wanaagsan waa in la helo qalabka ka MPEG / Mpg in Converter FCP u Mac , kaas oo kaa caawin kara inaad si loogu badalo files group MPEG in FCP qaab video socon dibna files si fudud loo keeno kartaa shaqo tafatirka.
FCP aqbalay QuickTime qaabab la aqbali karo, si aad u bedeli karaan faylasha MPEG / Mpg in QuickTime MOV ama MP4 on Mac. Markaas ka dib qaab beddelidda, aad dajiyaan karaa MPEG / Mpg in Final Cut Pro X ama Final Goo Studio habsami leh. Hel software hadda oo raac talaabooyinka si loogu badalo MPEG / Mpg in ay Final Cut Pro x socon videos dadaal lahayn.
Free download MPEG in FCP Converter u Mac :
Ku rakib iyo abuurtaan barnaamijka, waxaad arki doontaa interface software ah sida hoos ku qoran.
Sida loo badalo MPEG in Final Cut Pro on Mac talaabo talaabo ah
Tallaabada 1. Ku dar videos MPEG in Converter ah
Riix badhanka + video in aad ku darto files ka your computer. Tani Mac MPEG in FCP Converter si fiican u taageertaa jiitaa-dhibic oo Dufcaddii diinta, si aad u dajiyaan karaa oo loogu badalo dhawr files hal mar.
Riix labanlaab kor-arrow hoose ee Murayaad barnaamijkan iyo markaas dooran Pro Goo Final sida qaab wax soo saarka hoos ayeey tab. Converter ayaa xoojinaysa videos saarka ah ee Final Cut Pro ah.
Tallaabada 3. Start si loogu badalo MPEG in FCP on Mac
Hit Beddelaan inuu ku soo bilowdo file MPEG in ay diinta ka FCP ah. Mar Wareejinta waxaa inta badan ku xiran tahay dhererka video ah, xallinta iyo waxqabadka computer aad.
Ka hor inta diinta MPEG videos in FCP, qaar ka mid ah shuqullada tafatir oo la qaban karo MPEG in FCP Converter u Mac, riix icon qalin inuu u muujiyo suuqa kala Edit oo uu aado ee ku aadan ikhtiyaarka ah.
Badan oo ku saabsan qaab MPEG
MPEG (Waxaa loogu dhawaaqaa M-dhidibkii), kaas oo u taagan tahay Guuritaanka Picture Khubarada Group, waa magaca qoys ee heerarka loo isticmaalo sireed warbixin maqal iyo muuqaal ah (tusaale ahaan, filimada, video, music) qaab Tifaftirayaasha digital. Faa'iidada ugu weyn ee MPEG marka la barbar dhigo video kale iyo qaabab sireed audio waa in files MPEG waa badan yar oo tayo leh la mid ah. Tani waa sababta MPEG isticmaalaa farsamooyin riixo oo aad u casri ah. MPEG-1, MPEG-2 iyo MPEG-4 waa heerka MPEG inta badan la isticmaalo. MPEG-1 iyo MPEG-2 oo inta badan soo saaro faylasha la kordhiyo .mpg ah, iyo MPEG-4 la file .mp4 kordhin.
Isku day MPEG Free / Mpg in FCP Converter u Mac Now! Buy MPEG / Mpg in FCP Converter u Mac Now!